Faraaciintii Ugu Muhiimsanaa Masar Hore | Safarka Absolut
Luis Martinez | | Masar
Macbadka Ramses II ee Abu Simbel
Fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masriyiintii Hore waxay mas'uul ka yihiin caan ka ahaanshaha ilbaxnimadu wali ku leedahay meeraha maanta. Iyaga ayaynu ku leennahay shuqullo waaweyn inaan hadda ilaashanno iyo sidoo kale in adduunkaagu ilaaliyo dhammaantiis aura ee qarsoodiga iyo sixirka.
Mana aha xitaa xitaa aqoonyahannadii ugu fiicnaa ee Masar hore inay awoodaan inay sharxaan sida ilbaxnimada Niil ay u dhisi karto shaqooyinkeeda quruxda badan ee dhismaha iyo injineernimada xilliyadii boqortooyooyinkaas markii dhaqammo kale oo badani ay dirqi uga baxeen Neolithic. Haddii aad rabto inaad barato astaamahan aan caadiga ahayn wax yar oo ka sii fiican, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na raacdo annaga oo ku soo booqannayna meelaha ugu muhiimsan ee fircoonnada adduunka. Masar hore.
1 Fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar hore, laga soo bilaabo Djoser ilaa Cleopatra
1.1 Zoser, oo ah qoraaga Ahraamta ugu horreysa ee la ilaaliyo
1.2 Cheops, kii ugu horreeyay ee ka mid ah fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar Hore
1.3 Khafre, oo ah ku-xigeen mudan
1.4 Tuthmosis III, oo ah guuleyste
1.6 Amenhotep IV ama Akhenaten, oo loogu yeero Fircoon bidca
1.7 Tutankhamun, oo ah kan ugu yar kan ugu caansan fircoonnadii hore ee Masar
1.8 Ramses II, Boqorka Dhisaha
1.9 Cleopatra VII, oo ah kii saaray boqortooyadii Roomaanka
Fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar hore, laga soo bilaabo Djoser ilaa Cleopatra
Fircoonnadu waxay jiheeyeen aayihii Masar ee Qadiimiga ahaa muddo dheer oo ah saddex kun oo sano oo ay ku jiraan boqortooyooyin kala duwan. Waxay u dhawaayeen astaamo rabbaani ah ama, ugu yaraan, loo tixgeliyo farac ka mid ah ilaahyo sida Horus o Ra. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd geerida taas, la isku daray Osiris, waxay gaareen run rabbaaniga ah run. Laakiin, iyada oo aan la sii fahmin, aan la kulanno kuwa ugu caansan iyaga.
Zoser, oo ah qoraaga Ahraamta ugu horreysa ee la ilaaliyo
Fircoonkan, sidoo kale loo yaqaan Necherjet iyo inuu xukumay intii u dhaxeysay 2665 iyo 2645 BC, uma caan aha sida kuwii dambe. Laakiin, haddii aan kaala hadalno adiga Imhotep, laga yaabee inaad adigu si fiican isu hagaajin doonto. U wakiishay kii hore, kii labaadna wuu dhisay Ahraamta tallaabada Saqqara, koonfurta Memphis, caasimadda boqortooyadiisa.
Sidoo kale loo yaqaan 'Ahraamta Tallaabada' Djoser qaabkeeda darteed, waxay tusaale ahaan ugu adeegtay dhismooyinkii dambe ee Giza iyo dhammaan Ahraamyada kale ee dambe. Imhotep waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay naqshadeeyaha ugu weyn taariikhda.
Ahraamta tallaabada Saqqara
Cheops, kii ugu horreeyay ee ka mid ah fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar Hore
Si sax ah fircoonkii lahaa Ahraamta weyn ee Giza waa wax yar ka dib oo run ahaantii muhiim ah. Sidoo kale loo yaqaan Khufu, wuxuu xukumi jiray masiirihii Masar intii u dhaxeysay sanadihii 2589 iyo 2566 Ciise Masiix kahor. Taariikh ahaan, wuxuu caan ku noqday inuu yahay daalim, kaas oo Griiggu si weyn wax ugu darsaday Herodotus, taariikhyahan aad u adag.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, inaga dhaxalsiinta Ahraamta Weyn ee Giza waxay ka dhigeysaa waxyaabo kale. Maaha wax aan jirin, waa mida kaliya Toddoba Layaab Dunida qadiim ah oo aan maanta haysanno iyo sidoo kale Ahraamta ugu weyn ee intee laga dhisay Masar Hore.
Waxaa la rumeysan yahay in garaadka ka masuulka ah korintiisa uu ahaa naqshadeeyaha Hemiunu, taas oo wakhtigaas sidoo kale ahayd sheeko badan ama garsooraha ugu horeeya kadib fircoon laftiisa. Iyo weynaanta shaqadiisa ayaa fikrad kaa siin doonta xaqiiqda ah inuu ahaa dhismihii ugu dheeraa meeraha ilaa qarnigii XNUMX-aad ee Masiixa kadib, markii laga dhaafay caasimada Lincoln Cathedral, ee Great Britain.
en el Matxafka Masaarida ee Qaahira waxaad arki kartaa matalaadda Cheops. Waa taallo fool-maroodi ah oo yar oo uu ka helay taariikhaha taariikhiga ah ee Ingriiska Flinders Petrie Abydos, oo loo yaqaan Magaalada Xurmaysan ee Osiris.
Khafre, oo ah ku-xigeen mudan
Ina Cheops, fircoonkaan lama oran karo aabihiis meel xun buu dhigay. Sababtoo ah isagu kaliya muu dhisin Ahraamtiisa, laakiin sidoo kale wuxuu yaqaan Daarood weyn, oo ah mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee Masar hore.
Khafre wuxuu xukumayey sannadihii u dhexeeyey 2547 iyo 2521 iyo, haddii ay tahay uun qiimaha weyn ee uu na dhaxalsiiyay, waa inuu ka mid noqdo fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Qadiimiga Masar. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay wakiil isaga ah: the taallada Jafra fadhida, taas oo aad sidoo kale ka arki karto gudaha Matxafka Masaarida ee Qaahira.
Sphinx Weyn iyo Ahraamta Jaffra
Tuthmosis III, oo ah guuleyste
Fircoonkeennii weynaa ee soosocday waxbadan ugama muuqan walaacyadiisa wax dhisid ah iyo rabitaankiisa inuu guuleysto Xaqiiqdii, wuxuu sameeyay ololeyaal aad u tiro badan guud ahaan dhulalka maanta la yiraahdo Lubnaan, Suuriya, iyo Falastiin taas oo, intii uu xukunka hayay, Boqortooyadii Masar ay gaadhay kordhinta dhuleed ee ugu badan.
Tuthmosis III wuxuu xukumay 1479 ilaa 1425 BC iyo, halkii uu ka dhisi lahaa macbudyo, wuxuu wax ka qabtay soo celinta iyo ballaarinta kuwii hore. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku leeyahay toddobada weyn Karnak obelisks. Xabaashiisii ​​ayaa laga helay iyada oo aan la barbar dhigi karin Dooxadii Boqorka.
Sidii tii hore oo kale, ayaa iska lahayd Boqortooyadii XNUMXaad ee Masar wuxuuna xukumay intii udhaxaysay 1390 iyo 1353 ciise masiix kahor. Xukunkiisu wuxuu ahaa mid dheer oo barwaaqo ah, maxaa yeelay wuxuu ogaa sida looga faa'iideysto qabsashadii kuwii isaga ka horreeyay si loo ilaaliyo booska hegemonic ee aagga.
Wuxuu kaloo ahaa dhisme weyn. Ka mid ah shaqooyinkii uu kor u qaaday, cusub macbudka Thebes o Soleb's, Nubia. Xabaashiisa oo kaliya waxa loogu yeero Kolossi ee Memnon, laba taallo oo weyn, oo midkiiba siddeed iyo toban mitir dheer yahay.
Amenhotep IV ama Akhenaten, oo loogu yeero Fircoon bidca
Ina kii hore, wuxuu xukumay intii u dhaxaysay sanadihii 1353 iyo 1336. Wuxuu taariikhda ku galay naanaysta Fircoon Heretic maxaa yeelay wuxuu aasaasay cibaadada tawxiidka ee Aten, taas oo aan cid kale ahayn qorraxda.
Sidii oo kale taasi kuma filnayn, wuxuu raray caasimaddii boqortooyadii Tebas a Ajetaton, Amarna hadda, halkaasoo uu uga dhisay macbudyo waaweyn cibaadada cusub hantidii lagala wareegay wadaaddadii hore. Laakiin tani sidoo kale macnaheedu waa kacaan farshaxan. Ilaa iyo waqtigaas, astaamaha farshaxanka Masaarida waxay ku muujiyeen ilaahyada inay yihiin dad. Laakiin Amenhotep IV ayaa halyeeyadii loo gudbiyay qoyska boqortooyada.
Anaguna waa inaan sidoo kale kaala hadalno arrintan, maxaa yeelay haweeneydii Fircoon ayaa ahayd tan ugu caansan Nefertiti taasi waxay u muuqatay marar badan filimada iyo riwaayadaha. Haweeney u qurux badan sida ay hibo u leedahay inay xukunto, taariikhyahannada taariikh-diimeedka qaarkood waxay aaminsan yihiin inay iyadu ahayd Semenejkara in uu la wada xukumay fircoon laftiisa marka hore iyo kaligiis dambe. U soo noqoshada mawduuca farshaxanka, sida saxda ah Boobka Nefertiti Waa mid ka mid ah farshaxankii ugu caansanaa ee la yiqiin Masar Hore.
Xukun ahaan, Akhenaten, oo gacan ka helaya Nefertiti, wuxuu fuliyay dhammaan isbeddelada aan kuu sheegnay ee loo yaqaan ' Kacaankii Amarna. Isaga, wuxuu ku xoojiyay awooda boqortooyada kan wadaaddada sare waqtigiisuna wuxuu ahaa mid barwaaqo ku ah boqortooyada.
Tutankhamun, oo ah kan ugu yar kan ugu caansan fircoonnadii hore ee Masar
Wuxuu ahaa wiilkii hore laakiin ma ahayn xaaskiisa laakiin wuxuu ahaa Meketaton, oo ay adeer u tahay, sida laga soo xigtay ilo qaar, ama mid ka mid ah eeddadiis, sida ay sheegeen dadka kale. Wuxuu xukumay masiirkii Masar intii u dhaxeysay 1334 iyo 1325, isagoo si weyn u tirtiray wixii aabihiis falay.
Loogu yeedhay Boqorka Kid, soo celiyey cibaadada mushrikiinta isagoo awooddii badnayd ku soo celiyey wadaaddadii. Wuxuu kaloo dib u soo celiyey caasimada si Tebas. Laakiin sidoo kale wuxuu soo celiyey qayb wanaagsan oo ka mid ah taalooyinkii ku burburay marxaladdii hore ee qalalaasaha.
Tutankhamun waxaa laga yaabaa inuusan ka mid ahayn fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Qadiimiga Masar, laakiin shaki la’aan isagu waa kan ugu caansan. Daahfurka qabrigiisa oo dhaw dhaw Howard Carter oo habaarkii loo malaynayay ee umuuqda inuu ku dhacay dhamaan dadkii ka qayb qaatay daahfurka ayaa u rogay dabeecad ay ku hareeraysan yihiin sheeko quraafaad ah. Halkaas ilaa shaneemada iyo suugaanta hal tallaabo oo keliya ayaa ka jirta oo Boqorka Ilmaha ayaa ka soo muuqday filimo iyo riwaayado tiro badan.
Tutankhamun oo ku taal Luxor
Ramses II, Boqorka Dhisaha
Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay fircoonkii ugu xukunka dheeraa, maadaama uu xukumayay 66 sano (laga soo bilaabo 1279 ilaa 1213 BC). Sidoo kale wuxuu ahaa kan ugu carruurta badnaa, maadaama lagu qiyaaso illaa boqol.
Laakiin sidoo kale waxaa loo yaqaan boqorka wax dhisa guryo faro badan oo qurux badan oo uu dhisay. Waxaa ka mid ah, qabrigiisa u gaarka ah, the Ramsseum, Dooxada Boqortooyada, ama macbudyada caanka ah ee ka kooban Abu Simbel. Laakiin Ramses II wuu sii dheeraaday. Wuxuu dhisay caasimad cusub oo boqortooyadii ka xigta bariga wabiga Niil Pi-Ramses Aa-najtu ama Magaalada Ramses. Ugu dambeyntiina, magaca Xaaska weyn ee Boqortooyada sidoo kale waxay kuguula muuqan doontaa adiga aqoon: Nefertari, oo loo tarjumay "sida qorraxdu u ifto."
Cleopatra VII, oo ah kii saaray boqortooyadii Roomaanka
Markuu u yimid carshiga 51 BC, hegemony adduunka horeba wuu iska lahaa Roma. Si kastaba ha noqotee, haweeneydan awoodda badan waxay sameysay wax kasta oo suurtagal ah si ay u ilaaliso Masar, oo aan hadda ku noolayn xilligeedii ugu weynaa, gacmaha Latins.
Shaki la'aan, waa kan ugu caansan dhammaan kuwa qabtay booska fircoon. Xidhiidhada aad la leedahay Marco Antonio iyo Julius Caesar waxay dhaleen filimo aan tiro lahayn. Caddaalad Caesarion, wiil ay dhashay kii labaad, wuxuu ku beddeli doonaa iyada carshiga oo leh magaca Ptolemy XVIn kasta oo ay ka summad badnaayeen wax kasta oo kale, ilaa markii Cleopatra dhintey, Masar waxay noqotay gobol Roomaan ah.
Red Chapel ee Karnak
Sida muuqata, Cleopatra waxay ahayd haween aan caadi ahayn oo garaneysa sida loo sameeyo shabakad diblomaasiyadeed oo dhan, hogaamisa ciidamada badda iyo xitaa qorista daaweyn caafimaad iyo buugaag afaf ah.
Gabagabadii, kuwa aan ku tusnay waa qaar kamid ah fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar Hore. Iyaga waxaan ku leenahay qaar badan oo ka mid ah taalooyinkii ugu waaweynaa ee adduunka soo jireenka ah iyo dhaxalka ilbaxnimo aad u horumarsan xilligeeda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray kuwo kale oo iyaga caan ah. Tusaale ahaan, Menkaure, oo aan ku leenahay haramka saddexaad ee dhulka sare ee Giza; Aamiin I, dhisaha dhismaha Lisht-ka iyo qoraaga shaqooyinka suugaanta, ama boqoradda-fircoon Hatshepsut, horudhaca Cleopatra iyo yaa amar ku bixiyay dhismaha Macbadka Deir-el-Bahari iyo Red Chapel reer Karnak. Miyaadan u maleyneynin in kuwa jilayaashaani ay yihiin taariikh nololeedyo xiiso leh?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Fircoonnadii ugu muhiimsanaa ee Masar hore